Kandida 19 : Tsy mitombina ny hanatanterahana fifidianana
08/09/2018 admintriatra 0
Niray feo ary namoaka fehin-kevitra iraisana vita sonia, ireo kandida miisa 19 omaly. Nambaran’ireo kandida ireo fa iraisan’ ny rehetra ny voalaza anatin’ny fehin-kevitra , dia ny tsy mampitombina ny fanatanterahana fifidianana amin’ ny 7 …Tohiny
Tabera Randriamanantsoa : Hitory ny gazety Matin Hebdo
Hitoriana ny gazety Matin Hebdo ny kandida Tabera Randriamanantsoa amin’ ny Alatsinainy ho avy izao , noho ny antony fanalambaraka nahazo azy. Raha ny fanazavana nomeny dia nilaza ity gazety ity, fa nahazo vola 1 …Tohiny
Ankazondandy : 15 lahy nanafika tokan-trano telo
Nirefodrefotra ny basy. Trano telo no indray nasesin’ireo dahalo nilanja fitaovam-piadiana notafihana tany antampon-tananan’Ankazondady izay 50 kilometatra miala an’Anjozorobe, ny alin’ny alakamisy lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora tany ho any. Araka ny fanazavana …Tohiny
Fiantsoana ny mpifidy : Naka hevitry ny HCC ny Antenimieram-pirenena
Nolavin ‘ny fitsarana avo momban’ ny lalàm-panorenana ny fakan-kevitra napetraky ny filoha lefitra misolo toerana, ny filohan’ny antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy. Ny fifanarahan’ ny famohana ny fiantsoana ny mpifidy amin’ ny lalàm-panorenena no votoanton’ ny …Tohiny